Dhibaatooyinkii uu Dhigay Jwxo-shiil oo ku Dhex Baahay Dadweynah Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Aug 31, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Waxaanu in badan uga dignay dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ay ka dheeraadaan dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil la doonayo in ay dhaxasho ummadeenu, waxaan hubaa in badan oo ka mid ah dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ay garawsadeen garsho xume Jwxo-shiil iyo dhibaatooyinka uu dhigay.
Ma jirto dhibaato ka badan Doqonimada , aad ayeyna Somalidu uga maahmaahdaa sida; Doqon waa gaal, Doqoni sokeeye ma ah, doqontu xadhkaha lagu xidhi suxulada ayey ku sidataa, doqnoni qiiq kama kacdo ee daanka ayey meer meerisaa iyo doqoneey dabkaa ba,a.
Waxaan uga danleeynahay garashadu waa shay qaali ah, waana waxa aduunka hogaamiya, hadii garasho la waayana waxaa la waayi wax walba, waana garasho la,aan dhibaatada maanta haysata ummada Somalida Ogadeeniya. Ummada ma aha mid garashada la,a ee waxaa garasho la,aan ah Jwxo-shiil, waayo waxaa uu mar madax u ahaa halgan qiimo weyn ugu fadhiyey ummada Somalida Ogadeeniya, waxaana laga sugayey in uu mariyo wadadii ay mariyeen ragii uga horeeyey isaga.
Way ku adkaatay ummada Somalida Ogadeeniya in ay yidhaahdaan meesha aad doonto la mar halganka, anaguna waanu joojin taageerada aanu siino halganka, taas badalkeeda ummadu way iska aamuseen, waxayna jeclaysteen bal in ay hoos iyo kor wax ugu sheegaan in Eebe ku duxiyo, doqon hadal kama dego.
Waxaa kale oo ay ummada Somalida Ogadeeniya goosatay in la iska aamuso intii ay ceebi soo bixi lahayd, waxaana ay cid waliba ku gaabsatay intii la isla qasan lahaa, ha la iska aamuso. Waxaana uu hadriyey meel walba dhibaatooyin badan oo aan ka soo waaqsi lahayn ayuu lugaha la galay, waxaa uu cid walba ka hor keenay dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa dhibaatooyinka uu samaynayo, shilinka iyo shirkaba kula ag taagan beesha uu ka soo jeedo, oo iyada laftigeedu la wadaagta garashada gaaban Mr Jwxo-shiil, waxaa uu dhibaato u gaysatay beel kasta oo la daris ah, xitaa kuwa ay ilmo aabaha yihiin [Jaahuur cadka] dhibaatada ugu weyna iyada ayey ku dhacday. Marmarka qaarkood waxaad is odhan malaha waxa uu Jwxo u galayba waa dhibaatee in Aabahaa, dhibaatadii uu u gaystay Ogaden, maanta waxay ku soo ururtay Cali iyo Haruun waayo iyaga ayaa isugu Ood xiga.
Beesha Jwxo-shiil, oday gaboobay iyo wiil yar, waxay isu haystaan in ay yihiin Jwxo, wax kalena ma aha ee waa Jwxo-shiil aan taageerno, waxaa hubaal ah kuligood haday baaba,ayaan lagama yaabo in ay yidhaahdaan war jabnaye maxaynu ku jabnay. Jwxo ma inaga ayaa leh oo ka xigna ummadan 9 milyan ah, dhamaanay odaygana bari ayuu dhiman, Eedownay oo tolkeen is nacnay bari xagee ayeynu masalaha dhigan, aaway dadkii isweydiin lahaa, kuligood yar iyo wayn waa uun Jwxo-shiil.
Hadaba, xiligan hada la joogo xitaa doqonku uma baahna in wax loo sheego waayo dhibaatadii ayaa miir dilaacday, maalin walba waxaad arkaysaa dagaal iyo gacan qaad aan kala joogsi lahayn oo ay isku hayso ummada Somalida Ogadeeniya. Waxaan jirin kulan la isugu yimaado oo midha dhala, waxaan jirin qaaraan la kala qaato, waxaa kale oo aan jirin xitaa dadka is dila in uu tolku u kala gar qaado.
Dalka South Afrika oo la yidhi hubka wax dila suuqa ayaa laga gataa, waxaa ay noqotay ummada Somalida Ogadeeniya dadkii ugu horeyey oo inta ay qoryo gataan is dila hadh cad iyaga oo u kala safan qabiilo, waxayna salka ku hayaan dhibaatooyinka uu Jwxo-shiil ka dhax abuuray bulshada Somalida Ogadeeniya.
Waxaa kale oo ay dhibaato xoog leh ka socotaa Internetka ay dadku ku sheekaystaan sida, Qolalka PALTALK ayaa waxaa loo kala baxay qabiil iyo beel beel ay dadku isku soo doontaan, hadiiba ay is helaana ay is dilaan.
hadab Maxaynu dhawranaa, hadii aynu nahay bulshada Somalida Ogadeeniya ma intaynu afka gacanta saaro ayeynu sugnaa inta aynu ka baaba,ayno, taas oo ah mida ina keentay heerkan aynu maanta taaganahay mise Jwxo-shiil iyo beeshiisa ay garashadu ku yar tahay ayeynu qabanaa. Waxaa haboon garasho ma leh ay gacalkood kula dhaqmaan ee waa in sida tigrayga oo kale looga horyimaadaa, gacana laga siiyo beelaha ay laynayaan Jabhadnimada sida Beelaha Abaskuul iyo reer cali iyo dariiqo oo ay daris la yihiin.